IiMipu eziMnyama eziKhitshini eziMnyama eziKhanyayo
Ikhaya / Isikhokelo se-Faucet / Ungazicoca njani iipompo zeKhitshi eMnyama eMnyama
2021 / 01 / 28 uhleloIsikhokelo se-Faucet 7934 0
Umnyama omnyama ungenye yezinto ezigqityiweyo zanamhlanje kwindawo yeefompu kunye nezinye izinto zokupheka kunye neendawo zokuhlambela, kwaye ziyaziwayo. Phakathi kombala oqaqambileyo omangalisayo kunye ne-sheen egqibeleleyo yokugqitywa kwe-matte, ezi mpompo ziyathandwa kumakhaya kwihlabathi liphela.
Ewe, emva kokuba iifompo zakho zifakiwe, ufuna ukuqinisekisa ukuba bahlala bekhangeleka ngokusemandleni abo. Konke oko kwehla ekubanyangeni ngononophelo kunye nokusebenzisa iimveliso ezifanelekileyo kunye nobuchule bokucoca. Cinga oku njengesikhokelo segcisa lakho ekugcineni iipompo zakho zekhitshi ezimnyama zasekhitshini zikhangeleka zintsha kwiminyaka ezayo.
Kutheni le nto ndifuna ukuCoca iMat emnyama IFaucets yasekhitshini?
Esona sizathu sicace gca sokuba abantu bacoce oomatshini bokupakisha abamnyama matte sesibheno esibonakalayo. Xa amabala amanzi kunye nezinye iintsalela zomhlaba zifika kwiipompo zakho, ziphazamisa ukucoceka, ukubukeka, nokujonga okukutsalele ekugqibeni matte kwasekuqaleni. Ukucoca okulula kungabuyisela iifompo kwizinto ezifakwe ngokutsha, ngaphandle kwebhokisi.
Kwezinye iimeko, nangona kunjalo, ukulinda ixesha elide ukucoca iipompo zakho kungonakalisa itephu nayo. Ukuba izinto zinokudibana neeasidi, izinyibilikisi, okanye ezinye iikhemikhali ezinobungozi kwaye zihlala etephini kangangexesha elithile, zinokutya ekugqibeleni.
Ndihlala ndizicoca rhoqo iibhobho zam?
Ngokubanzi, xa itepu yakho yasekhitshini ifuna ukucocwa, uya kuyibona kuba uya kubona amabala ngaphezulu. Ukwenza ubomi bube lula, nangona kunjalo, kungcono ukongeza nje ukucoca umbhobho kwinkqubo yakho yokucoca ngeveki. Nangaliphi na ixesha ucoca ikhitshi lakho, nika itepu ukucoca ngokukhawuleza usebenzisa amanyathelo achazwe ngezantsi.
Iimveliso ezikhuselekileyo zokuCoca iiMipu zakho eziMnyama eziMnyama
Lonke uhlobo lomhlaba ekhayeni lakho, kubandakanya nompompo, ineemveliso ezithile zokucoca kunye nezixhobo ezisebenza kakuhle kunye nezinye ekufuneka uziphephe. Kwiipompo ezimnyama matte zasekhitshini, bambelela kwezi mveliso zilula.
Amanzi acocekileyo anesepha
Kwimeko ye-matte emnyama, ukhetho olukhuselekileyo lokucoca luyinto elula: amanzi asisiseko anesepha.
Sebenzisa isepha yokulinganisa isitya esine-pH- oku kuthetha ukuba isepha ayinayo i-asidi. Xuba nje isixa esincinci sesepha yesitya ngamanzi kwaye ulungele ukuya.
Izinto ezicocekileyo zokucoca umphezulu waMatte
Ukuba awuqinisekanga ukuba isepha yakho yokutya ine-pH-balance, kukwakho nezicoci ezikhethekileyo ezenzelwe indawo yematte. Eyona nto iphambili kwaba bacoci kukuba azinayo nayiphi na imichiza eqhelekileyo enokonakalisa ukugqitywa kwe-matte, esiza kuthetha ngayo apha ngezantsi.
Xa ucoce itompu yakho emnyama emnyama, tsiba uboya bentsimbi, iibrashi ezikrwada, kunye nezinye izinto kwaye ufikelele kwilaphu le-microfiber. La malaphu athambile kwaye agudile ngoko ke athambile ngokwaneleyo ukukhusela ukugqitywa kwetephu yakho.
Iimveliso zokuCoca kunye neTekhnoloji yokuThintela kwimidlalo eMnyama
Sonke sinamaxesha apho besingenazo iimveliso zokucoca ezicetyiswayo esizenzileyo ngenxa yoko siye sazenza nenye into ejikeleze indlu. Oko kunokuba yingozi, nangona ungazi ukuba zeziphi izinto ekufuneka uziphephe ngokuthe ngqo. Cima ezi mveliso ngelixa ucoca iipompo zakho ezimnyama.
Nawuphi na uMveliso ngeWax okanye uMmeli wokugcwalisa
Enye yezona zinto zibalulekileyo nezinomtsalane kwiimpompo ezimnyama ze-matte kukusilela kwazo okukhethekileyo. Abavelisi bavelisa le mpembelelo ngokunika itepu into enobuso obungenakubonwa bungako, egcwele imiqolo, amaqhuma kunye neentlambo.
Xa ukukhanya kuhlasela loo ndawo, uburhabaxa oburhabaxa buyabuyela kwakhona kwaye bubonakalise ukukhanya kuzo zonke iindlela ezahlukeneyo. Oku kusasaza ukukhanya ukuze kungabikho mbonakalo ucacileyo.
Indlela i-waxes kunye nezinye iiarhente zokugcwalisa ezisebenza ngayo kukugcwalisa ukungafezeki komphezulu, ukudala indawo ethe tyaba ebengezelayo. Ukuba usebenzisa ezi mveliso kwiifomethi zakho ze-matte, baya kugcwalisa ezona njongo zineenjongo kunye neentlambo ngaphezulu kwaye bashiye iipompo zakho zikhazimla, nazo.
Gcina ukhumbula ukuba esi siphumo sikhazimlayo kaninzi akwenzeki ngokulinganayo, nokuba. Kusenokwenzeka ukuba uphele ngokukhazimla ngokungaginyisi mathe kwifayiphu yakho ye-matte kanye.
Nawuphina uMveliso weCaustic okanye oMuncu okanye iiMveliso ngaphandle kokubandakanya izinyibilikisi
Njengawo nawuphi na omnye umqukumbelo, ukugqitywa kombala omnyama kusetyenziswa ngokuchanekileyo ngumenzi. Iimveliso eziqulathe iiasidi okanye izinyibilikisi zinokuyiphelisa loo nto. Oku kunokukhokelela kwimibala engalinganiyo okanye kwiimpawu zokunxiba kwangethuba ebomini bakho.
Iimveliso zokuCoca ngokurhabaxa
I-Acids kunye ne-solvents ayizizo kuphela iimveliso ezinokonakalisa ukugqitywa komnyama omnyama. Ezinye iimveliso zokucoca zenzelwe ukucoca ii-messes eziqinileyo ukuze babenazo iiarhente zokuhambisa imiyalezo njengee-microbeads. Gwema ezi ntlobo zezisombululo zokucoca ngelixa uzama ukuhlaziya iifompo zakho.
Amalaphu acocekileyo acocekileyo okanye iibrashi
Nakuphi na ukugqitywa kwetephu kunokuba nokukhuhla, kwaye ukugqitywa komnyama omnyama akunjalo. Ukongeza kokulumka ngeeringi, amaqhosha, kunye nezinye izinto ezikrwitshiweyo, kuphephe ukusebenzisa iibrashi kunye naluphi na uhlobo lwelaphu okanye isixhobo sokucoca esinoburhabaxa.
Ndazi njani ukuba iMveliso yam yokuCoca ikhuselekile kulungiso oluMnyama?
Ungathini xa unemveliso engekho kuludwe oluthi “do” okanye “musa” ukuba luluhlu olungasentla? Wazi njani ukuba ikhuselekile?
Ekugqibeleni, kungcono ungathathi umngcipheko. Iimveliso ezininzi "zeenjongo zonke" ezinjengokucoca ngokubanzi ziya kuba nenani leasidi. Ukuba awukwazi ukuqiniseka ukuba imveliso ilungelelaniswe ne-pH okanye ukuba kukho iikhemikhali kuluhlu lwezithako ongazi ukuba lukhuselekile, yicacise.
Ngoku ukuba unoluhlu lweemveliso zokucoca ezikhuselekileyo nezisebenzayo, uzicoca njani iipompo zakho zekhitshi elimnyama? Landela la manyathelo alula.
1. Hlanganisa isisombululo sakho
Kubantu abaninzi, isisombululo sabo sokucoca isitya sesitya kunye namanzi. Gcwalisa isinki yakho okanye ibhakethi ngamanzi, yongeza isepha, kwaye uyijikeleze ngesandla sakho ukuze uyixube.
2. Coca umphezulu ongaphandle
Ngesisombululo sakho sokucoca silungisiwe, gcwalisa ilaphu lakho le-microfiber kwisisombululo sokucoca. Emva koko, khalisa kwaye uyisebenzise ukosula umphandle weefompo zakho kunye nezinto ezilungiselelwe zona.
3. Coca ngaphakathi kwetephu
Emva kokucoca umphandle weefompu, sebenzisa ilaphu lakho ujikeleze nangaphakathi kwetephu kwakhona. Ukuba itepu inesixhobo somoya, lumka ungasebenzisi uxinzelelo kakhulu ukuze ungonakalisi i-aerator.
Kubalulekile ukwenza oku emva kokuba ucoce umphandle weefompo zakho, hayi ngaphambili. Kunokubakho iidipozithi kunye namasuntswana akhiwe ngaphakathi kwiimpompo zakho, kwaye awufuni ukuba loo masuntswana akrwele okanye abambelele kwisiphelo sangaphandle.
4. Yipule kwaye yome
Emva kokuba usule iipompo zakho ngesisombululo sakho sokucoca, qiniseka ukuba uzihlambe ngamanzi amatsha ukuze ungashiyi nayiphi na intsalela ngasemva. Okokugqibela, sebenzisa itawuli ye-microfiber okanye ilaphu le-microfiber ukomisa ngaphandle kweefompu.
Le nkqubo ayithathi ngaphezu kwemizuzu embalwa kwaye inokuba yenye yezona zinto zilula zokucoca ekhayeni lakho. Okwangoku, ukugcina nayo rhoqo kungenza umahluko omkhulu ekugcineni iifompo zakho zikhangeleka ngathi zintsha.
Ndingawasusa njani amabala aManzi kwiTephu emnyama yeKhitshi?
Amanyathelo angentla asebenza kakuhle ekubalekeni kwe-mill yokungcola kunye nokungcola kwiipompo. Ngamanye amaxesha, nangona kunjalo, unokuba neendawo zamanzi eziqhubekayo ekunzima kakhulu ukuzisusa. Ususa njani kula mabala anenkani?
Kwiipompo ezimnyama ezimnyama, olona khetho lulungileyo sisisombululo se-50% yeviniga kunye ne-50% yamanzi. Sebenzisa esi sisombululo kancinci ukusula amabala amanzi, emva koko uhlambe itepu ngamanzi acocekileyo kwaye uyomise ngelaphu le-microfiber.
Gcina ukhumbula ukuba amanye amabala amanzi aqhubeka ngakumbi kunabanye. Zama ukucoca amabala akho amanzi ngesisombululo sesitya okanye isixhobo sokucoca matte esikhethekileyo kuqala. Sebenzisa isisombululo seviniga kuphela ukuba ezinye iindlela azisebenzi.
Ukucoca iAerator kwiiMpompo zakho eziMnyama eziMnyama
Amanyathelo angentla apha afanelekile ekucoceni ngokubanzi kwifom emnyama emnyama. Nangona kunjalo, ukuba i-faucet yakho ine-aerator, kuya kufuneka uyicoce i-aerator amaxesha ngamaxesha, nayo.
I-aerator ijongeka njengescreen esincinci ngaphakathi kwetephu yakho. IiAerators zihluza amanzi akho njengoko ephuma ngelixa ukongeza umoya kumjelo wamanzi. Oku kunika umlambo ubume obugudileyo.
Kutheni le nto kufuneka ndicoce iAerator yekhompiyutha yam yasekhitshini?
Njengokuba luncedo i-aerator, inxenye yomsebenzi wayo kukucoca amasuntswana kunye needipozithi emanzini akho. Loo masuntswana akapheli; bangakha okanye ngaphakathi kwi-aerator. Oku kunokwenza kube nzima ngakumbi ukufumana amanzi acocekileyo, kwaye kwezinye iimeko, amasuntswana anokwakha ngokwaneleyo ukunqanda ukuhamba kwamanzi kwi-faucet yakho.
Ndihlala ndizihlambulula rhoqo kwiAerator yam?
Ukuba unayo i-aerator kwi-faucet yakho, ishedyuli yakho yokucoca kufuneka ixhomekeke ekubeni uyisebenzisa kangaphi. Yombhobho osetyenziswa yonke imihla njenge-faucet eqhelekileyo yasekhitshini, jolisa ekucoceni i-aerator kube kanye ngenyanga. Kwiifompo ezingasetyenziswanga rhoqo, ukucocwa ngekota kunokusebenza kakuhle.
Uya kufuna kwakhona ukucoca i-aerator yakho nangaliphi na ixesha kubonakala ngathi ivalekile. Ukuba ukuhamba kwamanzi akho ompompo kuye kwehla, kuhlala kuluphawu lokuba kufuneka ucoce i-aerator yakho.
Ungayicoca njani iAerator yethumbu
Ukucoca i-aerator yakho kuyinkimbinkimbi kunokucoca itompu yakho, kodwa isenokwenziwa kwimizuzu embalwa kwaye yinxalenye eyimfuneko yokugcina izinto zakho zihamba kakuhle. Landela la manyathelo acacileyo.
1. Susa iAerator
Kwiimeko ezininzi, i-aerator yakho iya kuba ngaphakathi kwesikrufu ngaphakathi kokuphela kwetampu yakho ukuze ukhulule ngokulula oko kufaka. Kuya kufuneka usebenzise iipleyisi okanye enye into ukubamba into efakiweyo, kodwa thantamisa ukuze ungonakalisi isiqwenga. Ukuba awuqinisekanga ukuba uyisusa njani i-aerator yakho, kukubheja okukhuselekileyo ukujonga imiyalelo yomenzi.
2. Lungisa isisombululo sakho sokucoca
Njengokucoca umphandle wombhobho wakho, ungasebenzisa isisombululo esilula samanzi kunye nesepha yokuhlamba isitya ukucoca i-aerator yakho. Ukuba unobunzima obunzima ngokwenene, unokuxuba isisombululo samanzi amathathu kunye nenxalenye yeviniga.
3. Coca iAerator
Sebenzisa i-rag, ilaphu, okanye isiponji ngesisombululo sakho sokucoca ukukrola i-aerator yakho. Kuya kufuneka ukwazi ukubona amasuntswana eqhekeka, ngoko ke kufuneka uhlambe i-aerator rhoqo ukuhlamba loo masuntswana. Unokusebenzisa ibrashi yamazinyo endala ukungena kwizithuba ezincinci ngaphakathi kwescreen se-aerator.
Uyakwazi ukuxelela ukuba i-aerator ihlambulukile ngokuhlolwa okubonakalayo okulula. Yinike irin yokugqibela uze uyomise ngelaphu okanye itawuli ecocekileyo.
4. Phinda uqokelele ndawonye Faucet
Nge-aerator yakho icocekile, lixesha lokuba uyibuyisele ndawonye. Guqula izinto ngaphakathi kwesikhafu se-screw ngendlela efanayo ezazikuyo xa uziqhekeza kwaye ujije ukufakwa kwakhona emva kwetephu. Ukuba awuqinisekanga ukuba uyenza ngokuchanekileyo, jonga imiyalelo yomvelisi wakho wephepha.
Ukulandela la manyathelo inyanga nenyanga okanye njalo kuya kukunceda ugcine i-aerator yakho icacile kwaye iyasebenza, ukugcina ucoceko lwakho lwamanzi apha endleleni. Gcina ukhumbule ukuba ukuba awukwazi ukucoca i-aerator yakho kakuhle, unokukwazi ukuthenga i-aerator endaweni yomenzi endaweni yokufaka yonke ipompo.
Ukugcina iipomethi zakho eziMnyama eziMnyama eziKhiweyo eziCoca ngokucocekileyo
Iimpompo ezimnyama zeMatte zinobunewunewu obungenakuphikiswa, obangoku, obukhangeleka kakuhle, yiyo loo nto zithandwa kumakhaya kuyo yonke imimandla kunye namaxabiso. Zijongeka zintle kuphela ukuba uzigcina zicocekile kwaye zigcinwa kakuhle, nangona kunjalo. Ngethamsanqa, kulula nje ngesepha yesitya, amanzi, kunye nelaphu elithambileyo veki nganye okanye njalo.
Ukuba ucinga ukufaka ngaphezulu kweendawo zekhaya lakho ngeebhokisi zokupompa ezimnyama okanye ukuba usazingela iipompo ezifanelekileyo zekhitshi kwasekuqaleni, jonga isikhokelo sethu sokuthenga itephu.
Iimveliso zeeMipu eziMnyama eziManzi zeKhitshi ziyacetyiswa
I-Handle-eyodwa yokuKhupha i-Sprayer ye-Kitchen Faucet
Iipompo zeKhitshi emnyama eMnyama
Iimpompo zomxube weKhitshi eMnyama eMatte
Ngaphambili :: Ungayikhetha njani itompu yangasese: 2021 Isikhokelo sokuthenga next: Uphengululo lweMibhobho yaManzi yegumbi lokuhlambela i-Delta: Isikhokelo sokuthenga ngo-2021 kwii-Delta zeBhafu yokuhlamba
2021 / 02 / 04 12550
2021 / 02 / 03 12274
2021 / 02 / 03 8443
2021 / 01 / 28 4489
2021 / 01 / 28 9987
2021 / 01 / 27 6327